I-TCC i-Afrika kunye ne-Eider Africa bayasebenzisana ekuPhathiseni abaPhengululi abaQeqeshiweyo abavela kwi-Sub Sahara Africa -AfrikaArXiv
E papashwe ngu UJohanssen Obanda on 6th Meyi 2021 6th Meyi 2021
Ukuba ungumphandi, mhlawumbi uqhelene nomjikelo wobomi wophando nayo yonke imingeni kunye namathuba aza nayo. Ziindaba ezimnandi ukuba ungumphandi ovela kwi-Afrika esemaZantsi eSahara kuba amaqabane ethu, i-TCC Afrika kunye ne-Eider Africa babhengeze ukusebenzisana kwabo ekunikezeleni ngcebiso malunga naloo nto.
I-TCC yase-Afrika kwaye Eider Africa Ndingene kubambiswano olusemthethweni lokuxhasa abaphandi bamakhondo okuqala ngokwenza uqeqesho kuhambo lwabo lophando. Omnye wemiceli mngeni ephambili ozixhasayo abaphandi bamakhondo okuqala abajamelana nayo kukuqonda indlela yabo yobomi kwisindululo sophando ukuya kupapasho. Ukunqongophala kwenkxaso kule nkqubo, kunegalelo kumgangatho wokuyeka kwabafundi kwizifundo zesidanga sokuqala. Ngale nto engqondweni, zombini i-TCC ye-Afrika kunye ne-Eider Africa ziya kugcwalisa isikhewu ngokubonelela ngenkxaso yoontanga kubahlobo kubaphandi bokuqala.
I-TCCAfrica izakube inikezela ngoqeqesho kwi unxibelelwano lwezenzululwazi kunye nokupapasha iikhosi, ngelixa i-Eider Africa iza kubonelela ngcebiso nenkxaso kumjikelo wobomi bophando kuwo omabini amalungu oluntu. Abaphandi bamakhondo okuqala kuya kufuneka babhalisele iikhosi ze-TCC zase-Afrika ukuze bafumane inkxaso yoqeqesho.
Ukuza kuthi ga ngoku, ubuncinci abaphandi abangama-900 abavela eSub Sahara baya kufumana uqeqesho koontanga ngale ntsebenziswano.
Okungakumbi malunga ne-EiderAfrica
Eider Africa ngumbutho oqhuba uphando, uyilo lwentsebenzo, kunye nokusebenzisa ngokubambisana, ngaphandle kweintanethi, kunye neenkqubo zophando kwi-Intanethi zabafundi baseAfrika. Siqeqesha abacebisi ukuqala iinkqubo zabo zokucebisa. Siyakholelwa ekufundeni koontanga, ukufunda uphando ngokwenza, ukukhathalela umphandi wonke, kunye nokufunda ubomi bonke. Sikhule siluluntu oludlamkileyo lwabaphandi kwiiklabhu zethu zejenali zophando kwaye sisebenza nabahlohli baseyunivesithi ukuphuhlisa uqeqesho kuphando olubandakanyayo. Iwebsite yethu: https://eiderafricaltd.org/
Okungakumbi malunga ne-TCCAfrica
IZiko loQeqesho kuNxibelelwano
I-TCC Afrika liziko lokuqala loqeqesho olusekwe e-Afrika ukufundisa izakhono zonxibelelwano ezisebenzayo kwizazinzulu. I-TCC Afrika liziko eliwina iTrust, elasekwa njengeziko elingenzi nzuzo ngo-2006 kwaye libhaliswe eKenya. I-TCC Afrika ibonelela ngenkxaso kubuchule ekuphuculeni iziphumo zabaphandi kunye nokubonakala ngoqeqesho kunxibelelwano lwabaphengululi nakwinzululwazi. Fumana okunye malunga ne-TCC Afrika e https://www.tcc-africa.org/about
Esi sibhengezo sapapashwa okokuqala e https://www.tcc-africa.org/900-early-career-researchers-from-sub-sahara-to-be-mentored-in-their-research-lifecycle/
Ukusebenzisana kwangaphambili ne-TCC Afrika kunye ne-Eider Africa
I-AfricArXiv, Eider Africa, I-TCC yase-Afrika, yaye Jonga kwakhona Ukujoyina imikhosi ukudibanisa izazinzulu ezivela kwiAfrika iphela kunye nezazinzulu ezibandakanyekayo kuphando olunxulumene neAfrika kuthotho lweengxoxo ezi-3 ezibonakalayo kunye nokuhlolwa kwentsebenziswano.
I-TCC Afrika ngentsebenziswano ne-AfricArXiv ingenise isindululo ngokudibeneyo kwi Ukwakha amandla okuvavanywa kwakhona koontanga kunye ne-curation e-Afrika.
tags: Eider AfricaResearchI-TCC yase-Afrika